China Desktop Style Series TS09S fekitari uye bhizimisi | Lantaisi
TS09S idesktop mhando isina waya charger iyo inoshandiswa kuchaja nhare mbozha uye TWS nharembozha zvigadzirwa. Matatu ekuchaja modhi, 10W-15W Maximum kuburitsa simba, ichipa zvinopfuura 78% yekuchaja kushanda. Ingo isa iyo foni paTS09S uye kuchaja, usambonetseke. Unogona kusarudza chero ruvara rwaunoda uye silkscreen, uye isu tichaigadzira kuti ikupe imwe yekuchaja ruzivo.
TS09S ndeimwe mhando yedesktop mhando isina waya charger iyo inogona kuiswa pamusoro padesiki, tafura uye kunyangwe chero zvimwe zvinhu 'nzvimbo yekuchaja nharembozha yako zvisina waya.
Ese mabhatiri anodzoreredzwa anotanga kudzikisira mushure meimwe huwandu hwechaji macircuit. Iyo yekuchaja kutenderera ndiyo nhamba yenguva iyo bhatiri inoshandiswa kuyera, ingave:
zvizere zvakazara zvobva zvadirwa zvakakwana
chidimbu chakabhadharwa chobva chadururwa neyakaenzana (semuenzaniso inobhadhariswa ku50% yobva yadirwa ne50%)
Kuchaja isina waya kwakashoropodzwa nekuwedzera mwero panowanikwa maitikiro echaji aya. Paunochaja foni yako netambo, tambo iri kumesa foni kwete bhatiri. Pasina waya, zvakadaro, simba rese riri kuuya kubva kubhatiri uye charger iri kungoisimudza-iyo bhatiri haisi kuwana kuzorora.
Zvisinei, iyo Wireless Power Consortium - iro boka repasirese remakambani akagadzira tekinoroji yeQi - vanoti izvi handizvo, uye kuti kuchaja nharembozha hakuna kukuvadza kupfuura kuchaja wired.
Semuenzaniso wekuchaja macircule, mabhatiri anoshandiswa muApple iPhones akagadzirirwa kuchengetedza kusvika ku80% yeavo ekutanga emagetsi mushure memazana mazana ezereji.
KUSVIRA KUSIMBISA KUSVIRA KWEMAHARA KUNYANYA YANGU FONI BHETSI?
Iwe haugone kubhadharisa bhatiri re smartphone, asi kuichengeta ichirojawa ku100% nguva dzese zvinogona kuita kuti ikanganise nekukurumidza.
NDINOFANIRA KUSIYA FONI YANGU PANE CHARGER YEMAHARA PANE HWEDU?
Mafoni efoni anovakwa kudzivirira mabhatiri avo kubva pakuwandisa. Kana iwe ukasiya foni yako ichichaja husiku humwe, inosvika 100% kugona uye kumira, kunyangwe ichizoramba ichikwidza kumusoro bhatiri pese painowira ku99%. Izvi zvinogona kupfupisa hupenyu hwebhatiri neimwe nzira.
Pashure: Mira Chimiro Chidimbu SW09
Zvadaro: Desktop Style Series TS06